Xvid Joiner: Isku dar dhowr ah Xvid Files galay One muuqan
> Resource > Video > Xvid Joiner: Isku dar dhowr ah Xvid Files galay One muuqan
Hel qaybo ka mid ah kala movie Xvid oo aad rabto inaad iyaga isu tagaan si ay u abuuraan ka mid ah oo dhan? Waxaad u baahan tahay video isku daro qalab ku anfacaya sida Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) . Sidaa daraadeed, waxaad tahay inay awoodaan inay wada midowdo qaybaha movie oo dhan la qasabno yar. Haddii aad rabto in aad ku darto saamaynta KMG ah ama Intro / credit si ay u dheeraad ah oo ku habboonaanta, isticmaal uun sim 300+ foom oo lacag la'aan ah. Waa maxay ka badan, sidoo kale si toos ah aad u dhoofin karaan faylka Xvid isku daro in DVD, si aadan u baahan standalone software DVD qoraalka si ay mar kale ku gubtaan.
Download Free Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) version maxkamad oo ku dhex socdo hoos ku faahfaahsan hage. Shaashada wuxuu ku salaysan yahay in madal Windows. Si aad ugu biirtid files Xvid ee Mac la Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ee Mac , tallaabooyinka sidoo kale waa isku mid. Kaliya u hubso in aad ka hesho version saxda ah.
1 files Import Xvid
Si aad u dajiyaan files Xvid, aad leedahay hoos ku qoran laba doorasho:
Guji "Import" xitaa ka videos Xvid on your computer, ka dibna hoos u hay Ctrl ama wareeg oo muhiim ah in ay doortaan dhammaan faylasha Xvid aad rabto in aad ku shuban.
Jiid oo hoos u files Xvid galay suuqa kala barnaamijka si toos ah.
Haddii aad rabto in aad ku darto sawirada qaar ka mid ah ama Cajalado in ay ku milmaan wada muuqan, iska tag, waayo. Dhammaan image joogto ah iyo files audio waxaa taageera.
2 Ku biir Xvid videos by jiitaa-n-dhibic
Ka dib marka aad ku shuban oo dhan files Xvid, waxay ku tusin doonaa sida thumbnails in User ee Album.To iyaga togther darsamaan, kaliya aad u baahan tahay si ay u jiidi oo iyaga ka mid hoos u Timeline video ah oo ay ka mid. Waxay la muuqan wada biireen doonaa farqiga u lahayn. Riix icon play ah, waxaad ka arki kartaa faylasha Xvid biireen shaashadda midig.
Si aad u habayn iyo amarka, kaliya jiidi item video si bidix ama midig. Fiiro gaar ah: Fadlan ha ku dahaadhaa on kasta oo kale video clip. Haddii kale, waxaad u kala jabeen doonaa oo geliso aad video asalka galay booska.
3 In kor loo qaado mideeyey Xvid videos (optional)
Ka hor inta dhoofinta aad ku biireen Xvid videos, sidoo kale shaqo kale oo aad samayn karto si aad shakhsiyeeyo Xvid videos. Sida awood leh oo si sahlan ay u isticmaalaan barnaamij video tafatirka, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) aad u saamaxaaya in ay:
Ma editings oo aasaasi ah: goo, kala, isku shaandheyn, cut, dalagga, qabsato dhalaalka, bedelkeeda, cado, isbedel xawaaraha ciyaareed, garoonka audio, iwm
Habee videos: Dalbo guurka, saamaynta, qoraalka, Liiska Forbes, Intro / credit, iyo dar dhawaaqa soo jeeda. In ka badan 300 oo arrimo la siiyaa.
Edit sida Pro ah: Isticmaalka qalabka ay gundhig awoodda sida Jump Goo, Toos Off, Muuse, Janjeeri-wareeg, Flash iyo Qabo, waxa aad sameyn kartaa in aad Xvid video tafatirka ugu galaan heerka ku xiga.
3 dhoofinta biiray files Xvid
Ka dib markii badalaad lagama maarmaan ah, waxaad heli kartaa Falanqeynta ka mid ah content aad abuuray. Marka qancay, kaliya riix "Abuur" button u badbaadin. Daaqadda pop-up wax soo saarka, waxaad dooran kartaa qaab aad doonayso inaad ka dhan ah qaabab loo jecel yahay, sida wmv, MP4, AVI, MOV, Mpg, FLV, iwm maxay ka badan, waxaad riixi kartaa "Settings Advanced" in ay sii dhigay encoder ah , dooran xal ka 1280x720, 640x480, 1920x1080, iyo in ka badan.
Ma doonaysaa in ay gubaan aad ku biireen Xvid files si DVD u arkaysid ciyaaryahanka DVD joogto ah ama TV shaashad weyn? Just riix "DVD" tab, markaas dhigay muuqa sida 16: 9 ama 4: 3 iyo heerka TV si ay u sameeyaan DVD video ah istareexsan.
Taasi waa. Download Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) oo hadda bilaabay!
Halkan waa tutorial video aad u ah:
Xvid magaabay: Sida loo jar Xvid Files
Xvid Cropper: Sida loo Dallaga Xvid Files
Sida loo Beddelaan XviD / Divx in TV Apple
Top 5 Free Online MTS in MOV Converter
Sidee baan u bedeli karaan duubay GoToMeeting?
Sidee inuu ka soo kabsado Videos ka GoPro fiidiyo
Easy Kan sameeyey Movie: Sidee si fudud Samee Movie
Sida loo Download Music ka iHeartRadio
Sida loo Edit iPhone (iPhone 5 / 5c / 5s) Video ku saabsan PC
Sida loo RIP Flash Video Website ka fudayd